Ukuphela kokufa, nguCixin Liu, ukuvalwa ngempumelelo | Uncwadi lwangoku
UJuan Ortiz | | into engeyonyani yebuchwepheshe, Iincwadi, Inoveli, Ezahlukeneyo
Ukuphela kokufa kukaCixin Liu.
Ukuphela kokufaInxalenye yesithathu ye-epic I-Trilogy yemizimba emithathu ebhalwe ngumbhali waseTshayina uCixin Liu ushiya kungekho mntu ungakhathaliyo. Le saga iye yamkelwa ngabalandeli beentsomi kwihlabathi liphela ngenxa yemvelaphi kunye nemibono yeembali Imemori yexesha elidlulileyo loMhlaba (2008) -kuthengiswa njenge Ingxaki yemizimba emithathu- kunye Ihlathi elimnyama (2017).
Ukuphela kokufa Yapapashwa kwasekuqaleni ngesiTshayina nangesiNgesi ngo-2017. IPenguin Random House Publishing House yakusingatha ukusungulwa kwayo ngeSpanish ngo-2018. Iziganeko zedenouement zihlawuliswa ngemvakalelo kwaye zibangela ukubonakaliswa okunzulu kumfundi. Ayinakuba yenye indlela, njengoko uCixin Liu ebumbe isitayile sakhe ngenxa yendlela eyiyo yokujongana nethiyori zesayensi kunye nobume bomntu.
2 Isishwankathelo sokuphela kokufa
3.1 Ububanzi obukhulu ngakumbi kunangaphambili
3.2 Imbali echazayo kakhulu
3.3 Isibonakaliso sokuba "asisodwa" kunye neziphumo zokudibana
ULiú Cíxīn wazalelwa eYangquan, eTshayina, ngoJuni 23, 1963. Abazali bakhe babengabavukuzi bePhondo laseShanxi. kwaye ngenxa yobundlobongela obabusenzeka ngexesha loHlaziyo lweNkcubeko, banyanzelwa ukuba bathumele uCíxīn omncinci kwindlu kaninakhulu eHenan. Wafumana isidanga sakhe sobunjineli ngo-1988 kwaye wasebenza eShanxi Power Station de kwasekugqityweni kwakhe njengombhali emva kokusasazeka kwehlabathi Ingxaki yomzimba emithathu.
Isishwankathelo se Ukuphela kokufa
Ukuphela kokufa iqala ngokuvuka kweCheng Xin -omnye wabalinganiswa abaphambili be Ihlathi elimnyama— emva kokuchitha isiqingatha senkulungwane kwindawo yokuzimela. Ihlabathi aliphumeleleyo ayililo leenkumbulo zakhe. Ngelo xesha abaphambukeli (iTrisolarians) abakafiki eMhlabeni kuba bavinjwe sisixhobo esinamandla sokuthintela.
Kodwa eli xesha loxolo nokuchuma lineziseko eziyingozi kakhulu. Emva koko, uCheng ujongene nokugcina ukhuselo loMhlaba. kwaye ufumanisa ukuba utshaba lwakhe alunakunikezela ngokulula. Okokugqibela, xa Umphathi (ukukhusela iplanethi) kuyasilela, umhlaba kufuneka ulungiselele ukusinda kunye neemeko ezinesiphithiphithi ezizayo.
Ububanzi obukhulu ngakumbi kunangaphambili
En Ukuphela kokufa, UCíxīn Liú uyaqhubeka nokuphuhlisa ibali lakhe elinzima -maleko ngokomaleko- Iithiyori ezahlukeneyo ezichazwe kwi Imemori yexesha elidlulileyo loMhlaba (Ingxaki yomzimba emithathu) kunye Ihlathi elimnyama. Nangona kunjalo, kwincwadi evala i-trilogy, umbhali uphonononga indawo ebanzi yokuqonda, yefilosofi kunye neyethiyori kunaleyo yezahlulo zangaphambili.
Kanjalo, umbhali uveza iingqikelelo zakhe malunga nemida yetekhnoloji, kunye nobunzima bokuziphatha obubekayo. Kwihlabathi elizayo le Ukuphela kokufa, abemi boMhlaba banyanzelekile ukuba baphile embindini wesinyanzelo esinganyamezelekiyo. Kukwimeko ephikisanayo kakhulu yendlala (paradoxical?). Ewe, kunjalo, ukuba umntu uthathela ingqalelo imeko yenkqubela phambili yesayensi kunye netekhnoloji ekufuneka ivelise impilo.
Imbali echazayo kakhulu
Ukwengeza, amadabi asemajukujukwini, achazwe ngocoselelo afaka umfundi kuxinzelelo lomlutha. Akukho kunqongophala kwamayelenqe ezopolitiko akhutshwe kwizikhalazo ezenziwe ngumlobi kulawulo lobuzwilakhe kunye nokubawa kwabanamandla. Kwangokunjalo, izimvo zentlalo zenzeka phakathi kokungaqiniseki okukhulu, kuba ekugqibeleni ikamva labantu yeyona nto iphambili.
Isibonakaliso sokuba "asisodwa" kunye neziphumo zokudibana
Elinye lawona manqaku makhulu agutyungelwe nguCíxīn Liú kolu ngcelele luphela kukuqonda malunga nobomi kwindalo iphela, kunye namathuba okuba izidalwa ezikrelekrele zikhona ngaphaya koMhlaba. Enye yeengxaki eziveziweyo zibhekisa kwisiphumo esinokubakho sokudibana phakathi kwempucuko emibini. Kwaye indlela, ewe, ezona zinamandla zihlala zisongamela kwaye zinyanzelisa iimeko zazo ngaphandle kokujonga abacinezelweyo.
Ngaphandle kwecandelo eliyintsomi leyelenqe, uCíxīn Liú uthoba iziganeko kunye nabalinganiswa kwimithetho eyaziwayo yomzimba. Ekuvaleni, umbhali uveza isiphelo esimanyumnyezi ngelixa eshiya amathandabuzo malunga nobukho beeyunivesithi ezifanayo. Okokugqibela, inika ukujonga kwindalo yonke apho ibeka khona umfundi njengelungu lendawo encinci kwindalo iphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Ukuphela kokufa, nguCixin Liu
Isiqithi esiphantsi kolwandle ngu-Isabel Allende
Iincwadi zeNkundla zeDreyfus